Radio Ergo, Author at Radio Ergo - Page 304 of 305
Muqdisho: qiimaha raashinka oo kor u kacay iyo sarifka lacagta dolarka oo hoos u dhacay
Suuqyada Magaalada Muqdisho ayaa maalmihii ugu danbeeyay waxa kajiray jahwareer u dhaxeeya ganacsatada iyo dadka wax ka iibsada kadib markii ay dhibaato kadhalatay hoos u dhac xoog leh oo ku...
Sicir barar xooggan oo ka jira degmada ceelwaaq
Sare u kac aad u xooggan, ayaa waxaa laga dareemayaa Suuqyada iyo Goobaha ganacsiga Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo. Sarakacaasi ayaa lala xariirinayaa hakad ku yimid Gaadiidkii Xamuulka ahaa ee...
Geedka keligii noolaha ama cali garoobka oo ku faafay beerihi gobolka hiiraan
Boqolaal ka tirsan beeralayda gobolka Hiiraan ayaa isaga hayaamay beerahoodii kadib markii geedka Cali Garoobka ama Keligii Noolaha loo yaqaan uu si daran ugu fiday dhul beereedka gobolka Hiiraan. Iyadoo laguda galay...
Guluf colaadeed oo xoog badan ayaa ka aloosan gobollada Jubbada Hoose iyo Gedo iyadoo ciidamo is garabsanayaa ay si saf ballaaran ah u galeen goobo door ah. Weriyaheenna Maxamed Axmed...
Naf iyo maal imisaa Soomaaliya ku luntay laga soo bilaabo 1991 (Warbixin)
Laba hay’adood oo Maraykan ah lana kala yiraahdo Center for American Progress iyo One Air Future Foundation, ayaa waxay soo saareen warbixin qiyaas ay kaga sameeyeen wixii naf, maal iyo...
Kufsiga xeryaha barakacayaasha ka dhaca (xog hoose)
Xadgudubyadda ka dhaca xeryaha ay ku sugan yihiin dadka soo barakacay ee ku yaal guud ahaan wadanka ayaa ah kuwo isku mid ah, waxaanna jira dhibanayaal aan indhuhu qaban, haweenka...
Dad ka soo barakacay Taabto oo gaaray degmada Dhoobley
Barakacayaal ka soo hayaamay deegaanka Taabto ee gobolka Jubbada Hoose iyo deegaannada ku dhow dhow, ayaa gaaray degmada Dhoobley ee ku taalla xadka ay wadaagaan Somalia iyo Kenya. Deegaannada Jaldeyse...
Hay’adihii gargaarka oo hakiyey hawlihii samafal ay ka wadeen xeryaha qaxootiga Dhadhaab
Amaanka xeryaha qaxootiga ee ku yaal Dhadhaab waqoyi bari Kenya oo sii xumaanaya ayaa keenay inay kordhaan fal denbiyaadka lagu afduubanayo shaqaalaha gargaarka caalamiga ah iyo gaadiidkooda, iyadoo weli aan...
Carruur ku dhimatay roobabka ka da’aya Muqdisho.
MUQDISHO: Maalmahan waxa magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dhexe iyo kuwa koonfureed ee Soomaaliya, si rasmi ah uga curtay roobabka xilliga dayrta oo ay ku diirsadeen dadka...
Isbitaalka SOS oo ku xirmay dagaalada Muqdisho
Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay sheegayaan in howlihii hay’adda caruurta ee SOS ay ka waday magaalada Muqdisho ay hay’addaasi hakisay, iyadoo shaqaalaheedii ka soo daadgureysatay xaafada...
Page 304 of 305 Prev 1 … 303 304 305 Next